Mogadishu Journal » Madaxweyne Xassan Sheekh oo si heer sare ah oo loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo’’Sawirro’’
Madaxweyne Xassan Sheekh oo si heer sare ah oo loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo’’Sawirro’’
Mjournal : — Madaxweynaha dowladda Soomaaliya Xassan Sheekh Max’uud iyo wafdi uu hogaaminayo oo maanta gaaray magaalada Kismaayo ayaa si heer sare ah loogu soo dhaweeyay magaalada Kismaayo ee xarunta u ah maamulka Jubba.
Madaxweyne Xassan Sheekh oo caawa ku sugan magaalada Kismaayo ayaa shir jaraa’id oo ay wada jir ugu qabteen xarunta madaxtooyada maamulka Jubba iyo isaga hogaamiyaha maamulkaas Axmed Madoobe, waxaa uu ku sheegay madaxweyne Xassan Sheekh in socdaalka uu ku tagay Kismaayo ay qayb ka yihiin nabadeynta Jubbooyinka iyo sidi loo dhameystiri lahaa heshiiskii lagu gaaray Addis Ababa.
Salaan sharaf ayeey wada jir uga qaateen madaxweyne Xassan Sheekh iyo Axmed Madoobe cutubyo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubba.
“Ujeedada socdaalkeena Kismaayo waxaa ka mid ah nabadeynta Jubbooyinka iyo sidii loo dhameystiri lahaa heshiisyadii la gaaray. Qodobbadii lagu heshiiyay intoodii badan waa la isku af-gartay kuwa harsanna waa la dhameystiri doonnaa,” ayuu yiri madaxweyne Xasan Sheekh.
Madaxweyne Xassan Sheekh ayaa shacabka ku dhaqan Jubbooyinka ka dalbaday in ay ka qayb-qaataan hannaanka nabadeynta ee dalka ka socda, isla markaana ay iska illoobay waxyaabihii horay u dhacay ee laga soo gudbay.
‘’Caawa waxaan joognaa Kismayo oo aan in mudo ahba ku haminayay in aan maalin maalaha ka mid ah soo booqdo, kulamo ayaan yeelan doonaan mas’uuliyiinta maamulka Jubba, caawo oo dhan waan sheekeysan doonaa, waan wada hadali doonaan, waxaan ka wada hadlli doonaa sidii wadajir nabada loogu anba-qaadi lahaa,’’ ayuu yiri madaxweyne Xassan Sheekh.
Axmed Madoobe hogaamiyaha maamulka Jubba oo shirka jaraa’id ka hadllay ayaa ku war-galiyay madaxweyne Xassan Sheekh in shacabka Jubbaland si farxad leh u soo dhaweynayaan, uuna aad u rajeynayo in socdaalkan uusan noqon kii uug dambeeyay, balse marar kale uu imaan doono.
“Madaxweyne shacabka Jubbooyinka way ku soo dhaweynayaan wayna ku sugayeen, waxaana rajeynayaa in marar kale aad gobolka imaan doontid,” ayuu si kooban u yiri Sheekh Axmed Madoobe oo muujiyay sida uu ugu faraxsanaa imaanshaha madaxweynaha Soomaaliya.
Safarka madaxweyne Xassan Sheekh Max’uud uu maanta ku tagay magaalada Kismaayo ayaa soo laabaya buugii khilaaf ee in mud ahba dhax yaala maamulka Jubba iyo dowladda dhexe.
Aas Qaran oo Muqdisho loogu sameeyay marxuum xildhibaan Cumar Isloow”Sawirro”